आइजीपी खनालको नेपाल प्रहरीको इतिहासकै साहसिक कदम,गृहमन्त्रीका भाई र सभामुखलाई समेत छाडेनन – Life Nepali
आइजीपी खनालको नेपाल प्रहरीको इतिहासकै साहसिक कदम,गृहमन्त्रीका भाई र सभामुखलाई समेत छाडेनन
काठमाडौं, २० असोज । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले नेपाल प्रहरीको इतहासमा साहसिक कदम चालेका छन्। डिएसपी देखि एसएसपीसम्म हुँदा तराईका जिल्लामा खटिएर संगठित अपराधी देखि सिरियल कि’लरसँग जुधे । ठूला अपराधीलाई ज्या’नको बाजी लगाएर प’क्राउ गरे । अपराध अनुसन्धानमा एसएसपी हुँदा गु’ण्डा आ’तंक नियन्त्रणमा ल्याए । देशभर भएका ग’म्भीर ठगीको घ’टनालाई कमी गराए । डिआइजी हुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा नयाँ शैली अपनाए । डिआइजीबाट एकैपटक आइजीपी बन्न सफल खनालले डेढ वर्ष संगठनको नेतृत्व लिएर महत्वपूर्ण कामहरु गरे । बन्न नसकेका प्रहरीका भवन निर्माण शुरु गराए, अ’पराध नियन्त्रणमा विशेष सफलता हासिल गरे ।
उनले अ’पराध गर्ने कसैलाई नछाड्ने नीति अपनाए । जस्तोसुकै दबाब थेगेर भएपनि का’रबाही गरिछाड्ने प्र’ण गरेका खनालको कार्यकालमा दुई ठूला क’दम चालिए । जसमध्ये एउटा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको सहोदर भाईको प’क्राउ र बहालवाला सभामुखमाथि अनुसन्धान । बादलका भाई संगठित अ पराधीका गि’रोहसँग जोडिएको सूचना आइजीपीसम्म पुग्यो । संगठित अ’पराध गरी जे’लमा रहेका समिरमान सिंह बस्नेतसँग नरेश थापाको सम्बन्ध र उनको शं’कास्प’द गतिविधिलाई ग’म्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिए । नरेशलाई प’क्राउ गर्न आदेश दिए । बहालवाला गृहमन्त्रीकै सहोदर भाईलाई आइजीपीले प’क्राउ गरेर देखाए जुन विगतमा कहिले भएको थिएन ।
खनालले निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिए । महरा तीनकुनेस्थित रोशनी शाहीको घरमा १२ असोजको साँझ पुगेको र त्यहाँ आफूमाथि ज र्बजस्ती गरेको रोशनले हटलाइनमा फोन गरेर प्रहरीलाई जानकारी गराइन् । आइजीपीले घटना दबाउन मानेनन् । अनुसन्धान अगाडि बढाउन लगाए । प्रमाणहरु संकलन गरेर अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउने गरी कदम चाल्न निर्देशन दिए । रिपोर्टसनेपाल
Previous प्याजको बोक्रा फाल्नु हुन्छ ? बोक्रालाई औषधि’को रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ !
Next रोशनीले बनाइन कृष्णको जीवन अ’न्धकार